Tag: haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Tag: fikasana media sosialy
Inona no vokatry ny marketing ara-tsosialy?
Alakamisy, Jolay 1, 2021 Alakamisy, Jolay 1, 2021 Douglas Karr
Inona no atao hoe marketing media sosialy? Fantatro fa toy ny fanontaniana fanabeazana fototra izany, saingy tena mila adihevitra kely. Misy refy marobe amin'ny paikady marketing ara-tsosialy lehibe ary koa ny fifandraisana misy ifandraisany amin'ny paikadin'ny fantsona hafa toy ny atiny, karoka, mailaka ary finday. Andao hiverina amin'ny famaritana ny marketing. Ny marketing dia ny hetsika na asa fikarohana, fandrindrana, fanatanterahana, fampiroboroboana ary fivarotana vokatra na serivisy. Ny media sosialy dia a